​विश्वकपमा दुनियाँको अनुमान ‘फेल’ खाने खतरा
Thursday, 12 Jul, 2018 1:07 PM
२८ असार, काठमाडौं । विश्वकप सुरु हुनुअघि विश्वका लाखौं दर्शकले बिजेता टिमबारे अनुमान लगाए । अर्जेन्टिना, ब्राजिल, पोर्चुगल, जर्मनी, फ्रान्स र इंग्ल्याण्ड, यीमध्ये एउटा टिमले उपाधि जित्ने अधिकांशको अनुमान थियो । यसबाहेक अरु टिमलाई पनि बिजेताको रुपमा कतिपयले अनुमान गरे । तर, क्रोएसियाले विश्वकप उपाधि उचाल्छ भनेर सायदै क्रोयसियाकै नागरिकले पनि अनुमान गरेका थिएनन् होला । मैदानमा आएपछि उपाधि जित्नकै लागि संघर्ष हुन्छ, तर क्रोएसियाकै खेलाडी र प्रशिक्षकले पनि जित्ने पूर्ण विश्वास गरेका थिएनन् होला । अर्जेन्टिना, ब्राजिल, जर्मनीलगायत टिम बाहिरिसक्दा बुधबारको खेलको पूर्वसन्ध्यासम्म विश्वका सबैजसो दर्शकको अनुमान थियो, फ्रान्स र इंग्ल्याण्डमध्ये एउटाले उपाधि चुम्ने भयो । तर, बुधबार राति क्रोएसियाले विश्वकै अनुमानलाई असफल सावित गराइदियो । अब, विश्वकै एउटै अनुमान छ कि फ्रान्सले जित्छ कि क्रोएसियाले । अझ इंग्ल्याण्डलाई हराइसकेपछि छ एक्कासी अनुमान उल्टिएको छ नयाँ राष्ट्र क्रोएसियाले नै उपाधि जैजान्छ कि ? हो यसपटक विश्वकपमा दुनियाँको अनुमान ‘फेल’ खाने खतरा प्रवल छ । पहिलोपटक फाइनलमा पुगेको क्रोएसियाले उपाधि नै जित्ने सम्भावना फितलो छैन ।
कस्तो देश हो क्रोएसिया ?
यो युरोपको सानो देश हो । ४२ लाख भन्दा केही बढी मात्रै जनसंख्या रहेको यो देश युगोस्लाभियाबाट स्वतन्त्र भएको धेरै भएको छैन । सन् १९९१ म स्वतन्त्र भएको यो देश पाँच वर्षअघि मात्रै युरोपियन युनियनमा प्रवेश गरेको हो । मध्य तथा दक्षिण पूर्वी युरोपको बिच भागमा रहेको यो देश एड्रियाटिक सागरको नजिक छ । निकै सुन्दर देश हो क्रोएसिया ।
क्रोएसियाले स्वतन्त्र भएयताका ६ विश्वकपमध्ये पाँच पटक खेलेको छ । यसअघि सन् १९९८ को विश्वकपमा क्रोएसिया सेमिफाइनलसम्म पुगेको थियो ।
यो टिमलाई अहिले विश्वकपको फाइनलसम्म ल्याउनुमा लुका मोड्रिक, मारियो मान्जुरकी, इभान पेरिसिकसहितका खेलाडीको भूमिका ठूलो छ । राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक संघर्ष लामो समय भोगेको क्रोएसियाले फुटबलमा ठूलो सफलता हाँसिल गरेको छ ।
कसरी रच्यो फाइनलसम्मको यात्रा ?
इंग्ल्याण्डका ट्रिपिएरले पाँचौँ मिनेटमा नै फ्रि–किकबाट गोल गर्दै अग्रता दिलाए पनि नतिजा क्रोएसियाको पक्षमा गयो बुधबार राति भएको सेमिफाइनलमा । ६८ औँ मिनेटमा इभान पेरिसिकले गोल फर्काएसँगै क्रोएसिया खेलमा फर्कियो ।
खेल अतिरिक्त समयमा धकेलियो र १०९ औँ मिनेटमा मान्जुकीले सुन्दर गोल गरे अनि टिमलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाए, क्रोएसिया पहिलो पटक विश्वकपको फाइनलमा पुग्यो ।
रुस विश्वकपमा क्रोएसियाले सबै खेलमा राम्रो गरेको छ । समूह चरणमा क्रोएसिया समूह डी मा थियो ।
पहिलो खेलमा एउटा उपाहार (आत्मघाती) गोल र पेनाल्टीमा लुका मोड्रिकले गरेको गोलबाट नाइजेरियालाई २–० ले हराएर विजयी सुरुवात गरेको टिमले दोस्रो खेलमा ऐतिहासिक सफलता हात पार्‍यो । उसले उपाधि दाबेदार मानिएको लियोनल मेस्सीको टिम अर्जेन्टिनालार्य ३–० ले पराजित गर्न सफल भयो ।
यो खेलमा रिबिक, मोड्रिक र रेकिटिकले गोल गरे । समूह चरणको अन्तिम खेलमा आइसल्याण्डलाई २–१ ले हराउँदै उसले समूह विजेताको रुपमा अन्तिम १६ मा स्थान बनायो ।
नकआउट चरणको पहिलो खेलमा उसले प्रतिस्पर्धी पायो बलियो टिम डेनमार्क । तर १–१ को बराबरी भएपछि पेनाल्टी सुटआउटमा गएको खेलमा क्रोएसियाले ३–२ ले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो ।
क्वाटरफाइनलमा पनि उसले पायो आयोजक देश रुस प्रतिस्पर्धी । यो खेलमा २–२ को बराबरी भयो र फेरि निर्णयका लागि पेनाल्टी सुटआउट । त्यसमा क्रोएसियाले नतिजा ४–३ ले आफ्नो पक्षमा ल्यायो ।
यसरी सेमिफाइनलमा आएको उसले इंग्ल्याण्डलाई पछि परेको अवस्थाबाट फर्किएर पराजित गर्न सफल भयो र अब फाइनल यात्रामा छ ।
फाइनल जिते विश्वकपमा एउटै खेल नहारी जित्ने टिम बन्ने
आउँदो आइतबार मस्कोमा हुने फ्रान्ससँगको फाइनलमा उसले नयाँ इतिहास लेख्ने सम्भावना छ । क्रोएसिया विश्वकपका पछिल्लो तीन खेलमा सुरुमा १–० ले पछि परेको छ र हरेक पटक पुनरागमन गर्दै जित निकाल्न सफल भएको छ ।
प्रशिक्षक ज्लाट्को डालिकलाई आफ्नो टिममाथि विश्वास छ र विश्वकप उचाल्नेमा आत्मबलसहितको भरोसा पनि ।